Ohatrinona ny vidin'ny fanamboarana ny efijery iPhone na iPad amin'ny Apple? | Vaovao IPhone
Ohatrinona ny vidin'ny fanamboarana ny efijery iPhone na iPad amin'ny Apple?
Nandritra ny herinandro lasa teo dia niresaka betsaka momba ny lesoka 53 isika, namboarina rehefa nanamboatra ny efijery sy / na ny bokotra fanombohana ny iPhone 6 na 6 Plus amina serivisy tsy nahazoana alàlana ary nahatonga ny fitaovana ho voasakana sy tsy azo ampiasaina tanteraka, tsy misy. vahaolana izao. Ny fampiasana ireo serivisy tsy ofisialy ireo dia nitombo be tato ho ato noho ny fahazoana miditra bebe kokoa ho antsika izay tsy manana Apple Store eo akaiky eo, satria ny vidiny dia toa ambany kokoa noho Apple. Fa marina ve fa ambany dia ambany ny vidiny raha ampitahaina amin'ny vidin'ny ofisialy? Moa ve ianao manonitra ny loza mety hananan'ny fitaovana iray fanodikodinam-bola amin'ny alàlan'ny fahaverezan'ny fiantohana tanteraka sy ny fampiasana fitaovana manana kalitao mampiahiahy? Andao hojerentsika izay takin'i Apple amin'ny fanamboarana isan-karazany ny fitaovany.
1 IPhone manamboatra amin'ny Apple
2 IPad manamboatra ao amin'ny Apple
3 Mendrika hanaovana risika ve izany?
IPhone manamboatra amin'ny Apple
Ity sary ity dia misy ny vidiny ofisialin'ny Apple.es hatramin'ny 14 febroary 2016. Ny fanovana ny efijery an'ny iPhone 5, 5c sy 5s anao dia misy vidiny € 147,10, izany hoe ambonin'ilay € 70 izay nanontaniany ahy tamina serivisy tsy ofisialy ho an'ny efijery an'ny iPhone 5-ko. Izy io dia avo roa heny saingy azoko antoka fa tsy afa-po mihitsy aho na ny efijery napetrak'izy ireo tamiko, izay azo jerena miaraka amin'ny LED backlight eo an-tampony, na amin'ny valiny farany, miaraka amin'ny efijery diso ary tsy misy azo atao avy vahaolana. Ny fitarainako tamin'ny serivisy teknika tsy ofisialy izay nitondrako azy dia tsy misy ilana azy ary navela niaraka tamin'ny iPhone 5 namboarina tsy dia tsara aho. Tao amin'ny tranonkala sasany dia nahita vidiny hatramin'ny 120 € aho hanamboarana izany.
Amin'ny fitaovana maoderina kokoa dia somary ambany ny vidiny, noho izany ny iPhone 6 dia mitentina € 127,10, ary ny 6 Plus dia mitovy amin'ny € 147.10 amin'ny iPhone taloha 5. Ny vidiny nomen'izy ireo ahy tamina serivisy teknika mitovy ho an'ny efijery iPhone 6 dia € 120 (efijery tsy tany am-boalohany, "mifanaraka" fotsiny araka ny nolazain'ny teknisianina tamiko). Fijerena amin'ny alàlan'ny tranokala samihafa izay manamboatra iPhones dia nanamarina ny vidiny mitovy na kely aza aho. Amin'ny tranokala sasany izay mampanantena fa tsy hampiasa afa-tsy singa tany am-boalohany, dia miakatra hatramin'ny 180 € ny vidiny. Tsy nahita ny vidin'ny fanamboarana ho an'ny efijery vaovao amin'ny iPhone 6s sy 6s Plus aho. Zava-dehibe ny manamarika fa ny vidin'ny Apple dia misy vidiny fandefasana € 12 sy VAT.
Ny fiovan'ny bateria amin'ny Apple dia € 79 na inona na inona fitaovana, izay mila ampiana € 12 raha ilaina ny fandefasana. Ny fanoloana ny bateria ao amin'ny iPhone 5 dia mitentina 40 € amiko amin'ny serivisy tsy nahazoana alalana, ary rehefa afaka telo volana dia zaraiko ny nahatonga azy tonga tamin'ny mitataovovonana tamin'ny fampiasana mahazatra. Ao amin'ireo tranonkala izay efa notsidihiko dia manodidina ny 60 € eo ho eo ny vidiny.
IPad manamboatra ao amin'ny Apple
Ny fanamboarana IPad dia tafiditra ao anatin'ny fahafaha-manao tokana ao anatin'ny serivisy teknikan'ny Apple.es. Miovaova ny vidiny arakaraka ny fitaovana, manomboka amin'ny € 201,10 ho an'ny iPad Mini sy Mini 2 ka hatramin'ny 671,10 ho an'ny iPad Pro. Anisan'izany ny vidin'ny fandefasana € 12 sy ny VAT. Azo atao izany amin'ny alàlan'ny fifandraisanao mivantana amin'i Apple sy ny fanazavanao ny tranga dia hahazo ianao vidiny hafa miankina amin'ny fahasimbana naterak'izany. Na izany aza, avo dia avo ny vidin'entana amin'ity tranga ity, indrindra raha raisintsika fa amin'ny maodely iPad maro dia manova ny vera dia ampy ahafahan'ny rehetra miverina amin'ny ara-dalàna, tsy mila manova ny tontonana LCD.
Ny fiovan'ny batterie dia manana vidiny iray € 99 izay € 12 dia tsy maintsy ampiana raha ilaina ny fandefasana. Tsy mora ny mahita serivisy teknika tsy ofisialy izay manova ny baterin'ny takelaka Apple, farafaharatsiny tsy hitako izy ireo, ka tsy afaka mampitaha ny vidiny.
Mendrika hanaovana risika ve izany?
Raha ny momba ny iPhone dia mazava ny valiny: tsia. Ny antoka fa ny fanamboarana dia manome anao ao anatin'ny serivisy teknika Apple, ny vidiny ary ny maha-izy azy tsy misy isalasalana ireo kojakoja dia antony lehibe kokoa hisafidianana Apple noho ireo tolotra tsy nahazoana alalana hafa. Amin'ny tranga iPad dia tsy mazava loatra ilay zavatra satria i Apple dia tsy manavaka ny fahasimbana kely sy ny fahasimbana lehibe, amin'ny fampiasana sarany tokana amin'ny fanamboarana rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ohatrinona ny vidin'ny fanamboarana ny efijery iPhone na iPad amin'ny Apple?
Niova ny vidin'ny efijery .. 115 € izy ireo iPhone 6 sy € 140 iPhone 6 Plus, herinandro lasa izay aho ary tsy niova ny vidiny na isaky ny applappore manana vidiny ireo
Antonio Jesus Olmo Ramos dia hoy izy:
Miaraka amin'ny iPad Pro raha manana maodely fototra ianao dia tsara ny mizara iray hafa alohan'ny hanovana ny écran.
Valiny tamin'i Antonio Jesús Olmo Ramos
Cocoplano dia hoy izy:
Fa maninona no mandainga ny olona rehetra? Apple dia tsy manamboatra fitaratra iPad, tsy iray. Apple mandainga, voamarina. IZAY ataony dia manome iray hafa anao ho an'ny vidiny adala ho an'ny fanovana vera. Tokony ho tsaroana fa ny vidin'ny fanoloana na mety mihoatra ny an'ny fanamboarana. Apple dia tsy afaka manova vera ary mitazona ny deformasiona aliminioma avy amin'ny fianjerany. Noho izany dia tokony hanova ny tranga ho an'ny estetika izay lafo kokoa ianao. Izy ireo no olan'ny famolavolana ratsy rehefa mampiasa adhesive amin'ny zavatra rehetra na saika amin'ny zava-drehetra.
Toa lainga tokoa ny hoe mpandainga.
Valiny amin'i Cocoplano
Traffic No!, Fampiharana iray hahafantarana ireo radara amoron-dalana